Hummingbird, Charming Garden Studio, West End - I-Airbnb
West End, i-Anguilla
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Trudy
Indawo yokuhlala enesitayela, epholile kodwa ethengekayo endaweni enhle. I-WIFI KAHLE. Inani elingehlulwa kubathandi be-Anguilla's West End! Kuphephile kubantu abangashadile - ezothando kwabashadile - nonke namukelekile. Hamba uye emabhishi: Mead's, Barnes kanye neMaunday's Bays nezindawo ezifana ne-Four Season's ne-Picante. Ikhishi elihle elingaphakathi/elingaphandle/indawo yokuphumula nengadi eshisayo. Izaphulelo zokuhlala isikhathi eside. KUFANELE UGOME uma uye eholidini e-Anguilla. Sicela uvakashele i-Anguilla Tourist Board ukuthola imigomo yamanje yokungena.
Lesi situdiyo esithandekayo sikhanya kakhulu futhi sinomoya.
Igumbi lokulala lipholile futhi libanzi futhi line-A/C, usilingi ophakeme, omhlophe wokhuni onefeni yosilingi, ifenisha yokhuni emhlophe ne-rattan namadrapes amhlophe.
Iwindi elikhulu nezicabha zaseFrance eziphindwe kabili zinikeza umoya opholile wemvelo nokukhanya.
Ukuhlobisa okulula kuthuthukisiwe ngomsebenzi wobuciko wase-Caribbean omibalabala, ohlanganisa amakhanda amahle anezimpaphe avela e-Anguilla's Summer Carnival - izivakashi ezamukelekile ukuzizama :)
Kunendawo encane yokusebenzela ehlinzeka ngezinto eziyisisekelo zokwenza ikhofi noma itiye, kanye nefriji encane yesiqandisi ne-microwave).
Indlu yokugezela ye-en-suite inezinsimbi ezimhlophe nezixhumi namathayili kakhilimu. Ilula kakhulu futhi ivulekile ngokungena eshaweni (alikho ikhethini) iwindi elincane, kanye nenqwaba yesitoreji.
Ifeni epholile, ebanzi, yasendlini/yangaphandle yokuphumula/ikhishi evulela engadini ezinhlangothini ezimbili. Izinsiza zekhishi zihlanganisa ifriji yesiqandisi, 2 ring gas burner, oven toaster, usinki kanye notop work. Kunetafula nezihlalo ezimbili zokudlela.
Ingadi ye-Hummingbird enhle, evulekile iwumsebenzi oqhubekayo - ogcwele izihlahla zendawo, izithelo nezimbali kanye nenqwaba yezinyoni! Yindawo yakho yokuphumula futhi ujabulele ekuseni libalele lase-Anguilla nobusuku obupholile bezindawo ezishisayo. Kunezihlalo ezimbili zasengadini kanye nesambulela uma ucela.
Kukhona indawo yokupaka ngaphandle kwestudiyo. Ungena ngomnyango ozinikezele, okhiyiwe futhi ufike engadini yangasese ebiyelwe ngodonga futhi ebiyelwe. Ukufinyelela ku-studio kungeminyango ephindwe kabili yaseFrance, engashiywa ivuliwe uma usekhaya inqobo nje uma ucisha i-a/c!
Indawo yokudlela edumile i-Picante iseduze kakhulu ngakho uma uchitha ubusuku bakho engadini uzozwa izivakashi zifika futhi zisuka lapho ngezikhathi ezithile - i-Picante ivamise ukuvala ngo-11.
Elinye lamakheli ahamba phambili e-Anguilla, indlu itholakala enhliziyweni ye-West End - omakhelwane bethu abaseduze yi-Picante kanye Nezinkathi Ezine!
Ngihlale ngijabule ukukunikeza ulwazi lwesiqhingi ngaphambi kokuvakasha kwakho. Ngokuvamile ngizokushiyela imiyalelo yokuthi uzivumele ungene, kodwa uma ungathanda ukuhlangana nami futhi ngikwazi ukwenza kanjalo, ngingajabula.